अर्काइभबाट : सन्दर्भ- गणतन्त्र दिवस
सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूले देश स्थायित्वमा गएको दाबी गरेपनि व्यवहार सोही अनुरुपको देखिएको छैन । राजनीतिक रुपमा गणतन्त्रजस्तो उपलब्धी हासिल भएपनि जनताको जीवनमा परिवर्तन नआउँदा असन्तुष्टिका स्वर बढ्दैछन् ।
सरकारी अड्डामा पञ्चायतको ‘ह्याङ ओभर’ कायमै छ । साना–साना काम गर्न पनि जनताले घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ । यो झनै प्रवृत्ति बढ्दो छ । सरकारी कर्मचारीलाई घुस नदिई कुनै काम बन्दैन, यो वास्तविकता हो । सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरूले जतिसुकै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको कुरा गरेपनि वा ‘भ्रष्टको मुख हेर्दिनँ’ भनेपनि भ्रष्टाचार रोकिएको छैन ।
निरंकुश राजतन्त्रलाई मिल्काए पनि राजतन्त्रकालीन शैली शासकमा देखिन थालेको छ । राष्ट्रपति सवारी हुँदा सर्वसाधारणले राजाको प्रत्यक्ष शासनकै झल्को दिने गरी घण्टौं सडक खाली गर्ने प्रचलन रोकिएको छैन । घण्टौं सवारी जाममा फस्ने भयले राष्ट्रपतिको सवारी हुने दिन अभिभावक आफ्ना बालबच्चालाई स्कूल पठाउन हिच्किचाउँछन् ।
दार्चुला/जाजरकोटमा सर्वसाधारणले सिटामोल र जीवनजलजस्ता आधारभूत औषधि पाउनबाट वञ्चित रहेको समयमा सांसदहरू विकासको बहाना बनाएर आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्नका लागि १० करोड रुपैयाँ पाउन बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका मन्त्रीले राज्यकोषको रकममा मोजमस्ती गरिरहेका छन्, नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार थपिरहेका छन् । पहुँचवाला सीमित नेता र उनका आसेपासेबाहेक सर्वसाधारणले गणतन्त्र आएपछि के फरक पाए ? जीवनमा के सुधार आयो ? यो विषयमा कसले समीक्षा गर्ने ?
सर्वसाधारण जनताको भोगाइमा सरकारको कार्यशैली २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र संघर्ष शुरू हुनुपूर्वको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा तात्विक भिन्नता छैन । यो बेग्लै कुरा हो, सत्ताको लाभ लिइरहेका कारण तत्कालीन माओवादी अहिलेको नेकपाको आधा हिस्सा मौन छ । शहरका सुविधासम्पन्न भिल्ला र बिलासी गाडीमा सयर गरेका कारण उनीहरूले आफूहरूको जस्तै जनताको जीवनमा सुधार आएको भन्न छाड्दैनन् । वर्गीय मुक्तिको सपना देखाएर सर्वसाधारणको बुद्धि भुट्न सफल योजनाकार अहिले आफ्नो वर्ग उत्थान भएपछि सबै समस्या हल भएको देख्दैछन् ।
गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको जनआन्दोलनमा जनताको उत्साहजनक सहभागिताका बहुआयामिक कारण थिए । बेरोजगार युवाले स्वदेशमै रोजगारीको आशा राखेका थिए । जमिन नहुने सुकुम्वासीले बासको अपेक्षा राखेका थिए । समग्रमा देशमा आर्थिक समृद्धि र उन्नतिमार्फत आफ्नो जीवनमा सुधारको अपेक्षा सबै जनताको थियो । दशकसम्म पनि गणतन्त्रले यी समस्याको समाधान दिन सकेको छैन । १ वर्षभित्र १ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर केपी ओली सरकारले गरेको भाषण हावामा उड्यो ।
गणतन्त्र पूर्वमन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना!
सीमितबाहेक अधिकांश नेताहरुको पुर्ख्यौली सम्पत्ति पनि कुस्त छैन तर उनीहरूको जीवनशैली राजकीय छ, पदमा बस्दा होस् वा नबस्दा । उनीहरू मात्र होइन, उनका आसेपासे र कार्यकर्ताको समेत कुनै पेशा र व्यवसाय छैन तर ठाँटबाँठ र रवाफ मन्त्रीभन्दा कम छैन ।
११ वर्षको बीचमा नेपालले विश्वलाई आश्चर्य पार्ने एउटा अभूतपूर्व प्रगति भने गरेको छ । सायद १ दशकमा विश्वका कुनै देशले यतिधेरै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद बनाउन सकेको थिएन होला । ११ वर्षमा १० वटा सरकार र अढाइ सय मन्त्री बनाउन सफल भयौं । गत वर्ष नेपाल भ्रमणको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘नेपालले अरु गर्न नसकेपनि पूर्व प्रधानमन्त्रीको क्लब ठूलै बनाएछ’ भनेर कटाक्ष गरेका थिए, पूर्वप्रधानमन्त्रीसँगको सामूहिक भेटमा ।
बजेट घाटामा चलेको देशमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म मन्त्रीहरूले विलासी गाडीमा रजाइँ भने गर्न छाडेका छैनन् । स्थानीय तहलाई बलियो बनाइसकेपछि बीचमा रहेको प्रदेश सरकार नामको ‘सेतो हात्ती’ पाल्दा देशको विकासमा लगाउनुपर्ने विकास बजेट चालू खर्च बढाउनमै खेर गइरहेको छ ।
एकैछिन सिंहदरबारभित्र छिरौं । कर्मचारीको व्यवहार हेर्नुस्, कर्मचारी युनियनका नेताको व्यवहार हेर्नुस् । उनीहरूको रवाफ र शैली हेर्नुस् । तपाईले त्यहाँ थुप्रै राजा भेटाउनु हुनेछ । पछिल्लो समय न्यायालयको बागडोर सम्हालेका महोदयहरूको अनुहार सम्झिनुस् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आउने केही पूर्व प्रमुखहरूको शैली र निर्णय प्रक्रिया हेर्नुस् । तपाईले राजसंस्थाको झल्को पाउनुहुनेछ ।
गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकामा नेतृत्व गर्नेको बानी व्यवहार हेर्नुस्, राजाको शैलीभन्दा फरक छ ? शिक्षा र संस्कार सिकाउने हाम्रो शिक्षण संस्था र क्याम्पस हेर्नुस् । विद्यार्थी नेताको व्यवहार के राजाका छोराहरूको भन्दा कम छ ?
तपाई यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने एकछिन राजमार्ग र छेउछाउका नदी किनारमा रोकिएर टोलाउनुस् । देख्नुहुनेछ बालुवा, गिट्टी र ढुंगा उत्खनन् गर्ने उद्योगहरू । तिनी उद्योगीको शैली हेर्नुस् त, राजाको भन्दा कम छ ? एकचोटी कुरा गरेर त हेर्नुस्, तपाईलाई खाउँला झैँ गर्छन् । दिनदिनै भान्सामा पाक्ने तरकारीमा विषादी मिसाएर बेच्ने राजाको त कुरै नगरौं । तरकारीमा विषादीबारे सोधीखोजी गर्दा उल्टै कुरेर पठाउने झैँ गर्छन् ।
बिरामी भएर अस्पताल जानुभयो भने सरकारी अस्पतालमा कामै नगर्ने राजा भेटिन्छन् । सरकारी अस्पताल गएर ज्यान नै धरापमा को राखोस् ? निजी अस्पताल जानुभयो भने त्यहाँ पैसामाथि नै गिद्देदृष्टि राख्ने अर्कै राजा भेटिन्छिन् । निजी अस्पतालको चर्को शुल्क हेर्नुस्, पैसा तिर्न नसक्ने सेवाग्राहीमाथि निजी अस्पतालका चिकित्सक र नर्सको व्यवहार हेर्नुस्, कम्ता निरंकुश हुन्छ ?
निजी बैंक र तिनका सञ्चालकको चर्तिकला हेर्नुस् । अनेक लोभ लेखाएर आफूतिर तान्छन्, अनि चर्काे व्याजको भारी डाम्छन् । सर्वसाधारणमाथि लूट मच्चाउने यी राजाभन्दा कम छन् त ?
‘राजकीय ठाँटबाँट’को जीवनशैली अपनाएका हाम्रा बेरोजगार नेताहरूको कुनै पेशा र व्यवसाय छैन । सीमितबाहेक अधिकांश नेताहरुको पुर्ख्यौली सम्पत्ति पनि कुस्त छैन तर उनीहरूको जीवनशैली राजकीय छ, पदमा बस्दा होस् वा नबस्दा । उनीहरू मात्र होइन, उनका आसेपासे र कार्यकर्ताको समेत कुनै पेशा र व्यवसाय छैन तर ठाँटबाँठ र रवाफ मन्त्रीभन्दा कम छैन । यो कसरी भइरहेको छ ?
नेपालको एक प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना यस्तै बेरोजगार राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तालाई ‘कूत’ बुझाउँदा हैरान परेको रहेछ । ‘जलविद्युत् उत्पादनका लागि लाइसेन्स लिएको, हामी फिल्डमा पुग्ने थाहा पायो भने चुल्ठेमुन्द्रेको ग्रुप आइपुगेको हुन्छ, उनीहरूलाई राजनीतिक दलका नेताको साथ छ,’ एक भुक्तभोगीले भने । झन्झटिला कानूनी र सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माणको चरणमा पुगेपछि यिनै दलको संरक्षणमा रहेका समूहलाई कूत बुझाउँदा व्यवसायी हैरान छन् । उद्योगीहरू किन लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ? स्वदेशकै उद्यमीको भागाभाग रहेको अवस्थामा विदेशी लगानी ल्याएर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको गफ कसले पत्याइदिने हो ?
– लोकान्तर अर्काइभबाट (पहिलोपटक प्रकाशित मिति १५ जेठ २०७६)
१९ यात्रु बोकेर उडेको तारा एयरको विमान सम्पर्कविहीन